Mety hifanojo amin’ny delesitazy ny fanisam-bato eto Antsirabe - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mety hifanojo amin’ny delesitazy ny fanisam-bato eto Antsirabe
R. Hajatiana Léonard﻿ il y a 4 années
Nafana ny famaranana ny fotoan’ny fampielezan-kevitra, andaniny. Ahiana hanjaka ny aizina mandritra ny fanisam-bato ankilany satria…
Niseho tamin’ny fiaraha-manao diabe omaly tao Antsirabe ny fifankahazoana sy ny fifankatiavana misy eo amin’ireo kandida mpilatsaka ho ben’ny tanàna. Samy Malagasy, vonona ny hifanome tanana amin’ny zavatra atao rehetra. Niezaka nanome fahafaha-po ireo vahoaka tao an-toerana ireo antoko samihafa. Nampitohana ny fifamoivoizana tamin’ny lalam-pirenena faha-7 mihitsy aza ity fisarihana olona faramparany ity. Nisy ihany ny korontana, mifanao vava sy mitora-bato ka zanaka kandida iray no voatoraka teo amin’ny tarehiny. Sarotra ny namantarana izay nisetrasetra tamin’izany na dia feno etsy sy eroa aza ny mpitandro ny filaminana. Mitohy hatrany ny fampiofanana omen’ireo vaomieram-panjakana misahana ny fifidianana ao Antsirabe amin’ireo tomponandraikitra mba hisorohana ny hosoka sy ny hala-bato isankarazany. Miandry izay higadonan’ny 31 jolay ny mponina handrotsahan’izy ireo ny safidiny satria efa mipetrapetraka daholo ny ao an-tsain’ny tsirairay, ary ampy tsara koa ny torolalana mikasika ny biletà tokana. Hentitra ny lalàna manoloana ny tokony ho fahamatoran’ny filaminana mandritra ny fifidianana ka voarara ny fisokafan’ny toeram-pisotroana zava-mahamamo. Nambaran’ny tetsy anivon’ny polisim-pirenena ambonivohitra Antsirabe ihany koa fa miisa roan-jato ny pôlisy haparitaka manerana ny tanàna hitsikilo ireo mpanararaotra. Vaindohan-draharaha ny fiarovana ny safidim-bahoaka amin’izao satria na ny kara-pifidianana aza dia efa voazara ny alarobia 29 jolay na ny an’Antsirabe voalohany izany, na ny an’Antsirabe faharoa. Hiharan’ny lalàna avy hatrany izay minia manakorontana sy misandoka ireny karatry ny mpifidy ireny. Tsy azo ataon’ireo kandidà intsony koa ny mizarazara zavatra any ambadika, mba hisintonana ny fon’ny olona. Ilaina araka izany ny mampandre haingana ny tomponandraikitra raha toa ka mahatsikaritra zavatra toy izany. Tanjona manko ny fangaraharan’ny safidinao sy hampazava azy fa tsy fifidianana maizimaizina na dia tongasoa indray aza ra-delesitazy.
Hiara-dalana amin’ny delesitazy
Nirehitra tampoka ny tariby mpitondra herinaratra tamin’ny alakamisy 23 jolay tao Vatofotsy Antsirabe. Soa ihany anefa fa mba tsy nitatra be ity firehetana ity satria voavonjy malaky ary vetivety dia tonga ny teo anivon’ny JIRAMA. Tsy kilalao tokoa ny afo, ary tato ho ato dia mahazo vahana tanteraka izy ity tahaka ny tao Mahamanina Fianarantsoa izay vokatry ny fipoahan’ny kamiao mpitondra solika no nampiredareda ny lelan’afo. Ny mahagaga ny rehetra tao Antsirabe anefa dia, ny ampitson’ny tranga iny ihany dia voaverin’ny JIRAMA an-tsakany sy an-davany ny fahasimba nahateraky ny firehetana. Herinandro amin’izao alakamisy 30 jolay izao izany saingy zary delesitazy isan’andro no iainana. Ny alarobia 29 jolay dia nanolo tariby ihany koa ny mpiasan’ny Jirama tao Ampanataovana Ambalavato ka ny nambaran’izy ireo tamin’izany dia hoe manararaotra manavao ireo fitaovana toy ny andrin-jiro efa tranainy ny JIRAMA amin’izao fotoana izao. Mety ho izany tokoa ve no izy raha ny fanontaniana manitikitika ny tsirairay. Matetika misy sampona mandrakariva eo amin’ny fandehanan’ny jiron’ny JIRAMA rehefa misy zavatra goavana hataon’ny fanjakana toy ny fifidianana. « Hiasa maizina ny mpanisa vato », hoy ny tebitebin’ny vahoakan’Antsirabe. Mbola tsy voafaritra mazava hatreto ny fahataperan’ny delesitazy fa aoka ny tsirairay hihevitra ny jiro ho toy ny tsy tapaka fotsiny e. Miditra amin’ny haizina fa mivoaka amin’ny mangarahara no irariana. Hafa indray ity
Airtel Madagascar : Eddy Kapuku, nouveau DG, s'installe aux commandes - il y a 5 jours
Guy Maxime Ralaiseheno : Vonon-kiaro ny Lalampanorenana ary miantso ny mpifidy handray anjara - il y a 8 jours
Fy Andrianarison tao Antanetibe Atsinanana : Nanolotra fitaovana hanamboarana ny paompin-drano - il y a 28 jours